ग्यास्ट्रिकका रोगीले दशैँमा के खाने के नखाने ? जानीराखौँ – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/ग्यास्ट्रिकका रोगीले दशैँमा के खाने के नखाने ? जानीराखौँ
तनावका कारण पनि ग्याष्ट्रिक हुन्छ। ग्याष्ट्रिकका लक्षणहरू पेट फुलेको जस्तो लाग्ने, पेट दुख्ने, छाती र घाँटीमा पोल्न, दुख्ने, अमिलो डकार वा पानी आउनु ग्याष्ट्रिकको मुख्य लक्षण रहेको पाइन्छ । यसको अरु लक्षणहरुमा कहिलेकाहीँ बान्ता हुनु, कब्जियत हुनु, भुँडि ढाडिनु, टाउको दुख्नु पनि लक्षणहरु हुन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **